Archive du 19-oct-2020
Ankoatra ny fanamboarana ny sakafo dia misy ny paipaika azo atao mba hanamora ny fampihenan-tena atao. Santionany aminizany ireto :
Manala « points noirs » aminny ranom-boatabia
Manimba ny hatsaran-tarehy ireny teboka mainty kely miparitaka eny aminny hodi-tava ireny. Misy olana kely ny hoditra matoa misy azy ireny,
Misotro rano, mahatanora lalandava
Antoky ny fahasalamanny vatana ny fisotroana rano na mangatsiaka io na mafana.
2 volana no niarahako taminny olon-tiako. Efa manambady izy ary niteraka iray,
fa efa tsy mifanaraka intsony. Manana olana ara-bola izy izao ka nangataka tamiko mba hindrana vola hanombohana ny varotra iarahanay ary avy eo dia izy no hamerina azy.
Akora ilaina (ho anolona 6) · Kotileta na soronondry 800g · Tratran-kisoa 300g · Saosisy 400g · Gana aminny boaty 2 · Tsaramaso maina 1 kg · Tongolo be 3 · Tongolo gasy 3 · Voatabia 250g · Voatabia lehibe 2 · Chapelure 6 sf · Bouquet garni 1 · Persily tahony 2 · Sira sy dipoavatra
Ireo olo-malaza nanova taovam-pananahana
Tsy nahatsiaro sambatra ireto olo-malaza ireto raha tsy nanova fananahana. Lehilahy izy ireo tany am-boalohany ary nivadika ho vehivavy, na vehivavy no nivadika ho lehilahy. Ny sasany nanova fiakanjo fotsiny, fa ny sasany tena nanova taovam-pananahana mihitsy, taminny alalanny fandidiana.
Asa raha misy amintsika no mahatsapa izany, fa mety hiseho aminny vatana ny hoe te hihinana sakafo iray anakiray, ary matetika.
« Sacs » 1. Sac à dos en cuir  30.000Ar - Gift Création Contact : 034 39 370 44 2. Housse ordi en fibres naturelles - 15 000 Ar- Gift Création Contact : 034 39 370 44
Ady amin'ny Covid-19 Tanora Malagasy nahavita masinina fanasan-tanana automatique
Manao fikarohana no sady mahay miketrika ny tanora malagasy. Manaporofo izany ny vokatra namboarin'ireo tanora avy ao Morondava ao,
Andro maneran-tany ho an'ny zatovovavy Nankalazaina teny Antanikatsaka
Notanterahina ny asabotsy 17 Oktôbra teo teny amin'ny Kianja Antanikatsaka Itaosy ny fankalazana tamin'ny fomba ôfisialy ny andro maneran-tany
Bakalorea Manameloka ny fanakorontana ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony
Niantso ny olom-pirenena rehetra mba hamela ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea ampitoniana ny Ministry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-Tsiansa ny Profesora ASSOUMACOU Elia Béatrice
Na dia efa mihena isanandro aza ireo tratranny valanaretina Covid-19 eto amintsika dia mitohy hatrany ny fampitaovan'ireo malala-tanana.
CNFM Mitaky ny mangarahara aminny fanampiana nomena vehivavy
Takianny filankevim-pirenena ho anny vehivavy Malagasy na ny CNFM, ny hisianny mangarahana tanteraka ny aminny tohana sy ny fanampiana ho anny vehivavy, ary ny fampitoviana lenta ny fanampiana azonny vehivavy eraky ny faritra rehetra. 
CNTEMAD Amin'ny 23 Novambra ny fanadinana
Ny 23 novambra ka hatramin'ny 27 novambra izao no hantanterahana ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana 2019 - 2020 ho an'ny fampianarana hampitain-davitra CNTEMAD.